Imithetho ye-Social Media | Martech Zone
Imithetho Yezokuxhumana Komphakathi
NgoLwesihlanu, Novemba 16, 2012 NgoLwesihlanu, Novemba 16, 2012 Douglas Karr
Uma ufunde le bhulogi isikhathi esithile, uyazi ukuthi ngiyayidelela imithetho. Imithombo yezokuxhumana isencane kakhulu ngakho-ke ukusebenzisa imithetho kuleli phuzu kusabonakala kungakabi isikhathi. Abantu baseFastCompany bahlanganisa iqoqo lamazwibela wezeluleko futhi bababiza ngokuthi Imithetho Yezokuxhumana Komphakathi.
Le infographic iqoqo lemithetho eshicilelwe kumagazini kaSepthemba kamagazini. Angikaze ngiyibize le mithetho njengoba ngiphule eminye yayo futhi ngathola imiphumela… kepha ngincoma kakhulu lokhu njengeqoqo elihle lamathiphu wokuthuthukisa imizamo yakho yokumaketha umphakathi.
I-FastCompany manje isiqoqa amathiphu akho. Ungakwazi bahambise online.
Tags: fastcompanyimithetho yezokuxhumanasocial mediaimithombo yezokuxhumana infographicimithetho yezokuxhumanaamathiphu ezokuxhumana nabantu
Misa Ukufihla Isici Esibaluleke Kunazo Zonke Zakho Ewebhu
Izinhlelo zokusebenza ezi-10 eziphezulu kumele zibe nezinhlelo zokusebenza ze-iPhone
Nov 30, 2012 ngo-1: 55 AM
Kwesinye isikhathi ngiyishaya indiva imithetho kodwa ngandlela thile ngiyabahlonipha abantu abathobela leyo mithetho, kepha ezinkundleni zokuxhumana ngiyayibekezelela imithetho ngenza konke engikufunayo ngaphandle kokucabanga ngemithetho.
Mar 4, 2013 ku-11: 54 AM
Angivumelani nenqwaba yalezi futhi angicabangi nokuthi ezinye zimayelana nemithombo yezokuxhumana.
Mar 5, 2013 ku-10: 45 AM
Siyavumelana @barryjfeldman: disqus!
Ngo-Apr 11, i-2013 ku-5: i-13 PM
"Imithombo yezokuxhumana isencane kakhulu ngakho-ke ukusebenzisa imithetho kulesi sikhathi kusabonakala kungakabi isikhathi." Akugcini lapho ngaphambi kwesikhathi - wona kanye umqondo wokukhangisa ngemidiya yezokuxhumana 'Imithetho' uyahlekisa kancane! Ditto yabo bonke labo bukhazikhazi bokuzijabulisa ku-'Izindlela ezihamba phambili 'zenhlalo ... Ngaphandle kokuthi, ngizama ukukuthengisela incwadi yami yakamuva - uma kunjalo, qhubeka ubanqwabele phambili!
Ngokuzimisela - alukho ngempela usuku noma isikhathi esingcono kakhulu sokusithumela ku-Twitter… .noma yini enye engcono kakhulu yokwenza umsebenzi wezenhlalo wemikhiqizo - ukumaketha kwezenhlalo kunezinhlobonhlobo eziningi kakhulu okungenza ikhanda lakho ligijime ngokucabanga nje ngabo! Umphakathi uyathakazelisa… uyinkimbinkimbi… ugcwala ngamandla wokumaketha - nezingibe ezingaba khona kunoma yimuphi umthengisi ozama ukwenza kube lula ukuphila ngakho!